ဟာလန်း သွားချင်တဲ့ အသင်း ၊ အသံတွေကျယ်လာတဲ့ ရွှေဘောလုံးဆုရှင် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ဟာလန်း သွားချင်တဲ့ အသင်း ၊ အသံတွေကျယ်လာတဲ့ ရွှေဘောလုံးဆုရှင် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ဒေါ့မွန် တိုက်စစ်မှူးလေး အာလင်း ဟာလန်း ဟာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ ကစားဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဟာလန်း ရဲ့ ဒေါ့မွန် ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အဆင့်ကနေ နောက်တဆင့် မတက်နိုင်ဘဲ ယူရိုပါလိဂ် ကို ဆင်းသက် ကစားရ တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကတော့ ရပ်ဖ် ရန်းနစ် ကို လိုကိုမိုးတစ် မော်စကို အသင်းကနေ ခေါ်ယူ နိုင်ကြောင်း မကြာခင် အတည်ပြု နိုင်တော့မယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရန်းနစ် ဟာ ဒီရာသီကုန် အထိ ယာယီ နည်းပြ တာဝန်ကို ရယူ သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၂ ဇွန် ကနေ ၂၀၂၄ အထိ အသင်းရဲ့ အတိုင်ပင်ခံ အဖြစ် ဆက်လက် ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အကယ်၍ ယူနိုက်တက် ဘက်က နည်းပြ ရာထူး အတွက် ထပ်မံ ကမ်းလှမ်းခဲ့မယ် ဆိုရင်လည်း ရန်းနစ် အနေနဲ့ စဉ်းစား သွားဖွယ် ရှိတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရန်းနစ် ဟာ လာမယ့် အပတ် ထဲမှာ အလုပ်ပါမစ် ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်တပတ် ကစားမယ့် အာဆင်နယ် နဲ့ ပွဲမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို စတင် ကိုင်တွယ်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အေစီမီလန် အသင်းကတော့ နည်းပြကြီး စတီဖာနို ပီယိုလီ ကို ၂၀၂၃ ဇွန်လ အထိ စာချုပ် သက်တမ်း တိုးလိုက်ပြီ ဖြစ်ကာ ၂၀၂၄ ဇွန်လ အထိ ဆက်လက် သက်တမ်းတိုးခွင့်လည်း စာချုပ်သစ် မှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရွှေဘောလုံး ဆုပေးပွဲကြီး ကျင်းပဖို့ ၂ ရက်သာ လိုတော့ချိန် မှာတော့ လီယွန်နယ် မက်ဆီ ဟာ ဒီနှစ် အတွက် ဆု ကို ရရှိမယ်လို့ သတင်းတွေ ကျယ်ကျယ် လောင်လောင် ပေါ်ထွက် လာခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နောက်ခံလူ ဘန်ချီဝဲလ် ကတော့ သူ့ အနေနဲ့ ဒဏ်ရာ ကနေ အမြန်ဆုံး ပြန်ကောင်းလာအောင် ကြိုးစား သွားပါမယ်လို့ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကတိပြု သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ချီဝဲလ် ဟာ အရွတ်စုတ်ပြဲ ဒဏ်ရာကြောင့် လနဲ့ချီကာ အနားယူရ တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ဟာ မနက်ဖြန် မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို လက်ခံ ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး ကန်တီ ၊ ချီဝဲလ် နဲ့ လူကာကူ တို့ ပါဝင် နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်းကတော့ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ မှာ မန်စီးတီး ရှေ့တန်းလူ ဖာရန်တောရက်စ် ကို အလဲအထပ် နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သတင်းထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
လက်စတာ စီးတီး ဟာ ဒီတပတ်မှာ ရင်ဆိုင် တွေ့မယ့် ဝက်ဖိုဒ့် အသင်းမှာ ပါဝင်လာမယ့် နည်းပြဟောင်း ကလော်ဒီယို ရာနီရေးနီ ကို သူရဲကောင်း တယောက်လို ကြိုဆို ဂုဏ်ပြုဖို့ စီစဉ် ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရာနီရေးနီ ဟာ ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီတုန်းက လက်စတာ စီးတီး နဲ့ အတူ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေး ချန်ပီယံဆုကို ရယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းပြ ဖြစ်ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး နည်းပြ အန်တိုနီယို ကွန်တီ နဲ့ ဒါရိုက်တာ ပါရာတစ်ချီ တို့ဟာ လာမယ့် ဇန်နဝါရိမှာ အီတလီ ဈေးကွက် ကို အဓိက မွှေနှောက်ဖို့ ရှိနေပြီး ဖီအိုရင်တီးနား တိုက်စစ်မှူး ဗလာဟိုဗစ် နဲ့ ရိုးမား တိုက်စစ်သမားလေး နီကိုလို ဇာနီယိုလို တို့ကို စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဂျာမန်ကလပ် လိုက်ပ်ဇစ် ဟာ ဂျာမနီ အတွင်း ကိုဗစ်ပိုး ကူးစက်ခံရမှု အများဆုံး ကလပ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အသင်းသား နဲ့ ဝန်ထမ်း ၆ ဦး အထိ ပိုးတွေ့ရှိ ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် လိုက်ပ်ဇစ် ဟာ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာမှာ ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု နောက်ဆုံး ပွဲစဉ် ကို ကွင်းပိတ် ကစားဖို့ စီစဉ် နေကြပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
ဆီဗီးလား အသင်းက ဂျူးလ် ကွန်ဒေ ၊ လူးကပ်စ် အိုကမ်ပိုစ့် နဲ့ ဒီယေဂို ကားလိုစ့် တို့ဟာ ဒီတပတ် ကစားမယ့် ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ ပွဲစဉ်ကို ဒဏ်ရာတွေကြောင့် ပါဝင် နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲ ဘက်မှာတော့ အီဒင်ဟာဇက် ဆက်လက် နားနေရဦးမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒေးဗစ် အလာဘာ ကတော့ ပြန်လည် ပါဝင် နိုင်ဖို့ အလားအလာ ရှိနေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ကာတာ နိုင်ငံက အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပမယ့် ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲ အတွက် ဇုန်အလိုက် Play-off မဲခွဲမှု ကို ယမန်နေ့ က ပြုလုပ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဥရောပ ဇုန်ရဲ့ လက်ကျန် ၃ နေရာအတွက် မဲခွဲမှု မှာတော့ ပေါ်တူဂီ နဲ့ အီတလီ တို့ဟာ လမ်းကြောင်း အတူ ကျရောက် ခဲ့တာကြောင့် သူတို့အထဲက အနည်းဆုံး ၁ သင်း ကမ္ဘာ့ဖလား နဲ့ လွဲချော်ဖို့ သေချာ သွားစေခဲ့ ပါတယ် ။
အင်တာကွန်တီနင်တယ် Play-off မဲခွဲမှုမှာတော့ အာရှဇုန် က အသင်း နဲ့ တောင်အမေရိက ဇုန် အသင်း တို့ ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံ ကြမှာ ဖြစ်ပြီး မြောက် အမေရိကဇုန် က အသင်းကတော့ သမုဒ္ဓရာပိုင်းဇုန် က အသင်းနဲ့ ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒိ အသင်းတွေ ကတော့ ခုထိ အဖြေမထွက် သေးပါဘူး ။
Previous Article မန်ယူနိုက်တက် နဲ့ ပွဲကျရင် ရော်နယ်ဒိုနဲ့ အားပြိုင်ပြီး သူ့ရဲ့လက်စွမ်းကို စမ်းသပ်ချင်တယ်လို့ ဖွင့်ဟလာတဲ့ ရမ်စ်ဒဲလ်
Next Article ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဖြစ်လာတဲ့ ရန်းဂနစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မိတဲ့ အချက်ကို ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ ဘာဘာတော့ဗ်